ईपिएस र पिई रेसियोको आधारमा कुन बैंक उपयुक्त ? ८ वटा 'ओभरभ्यालुड' | Notebazar
ईपिएस र पिई रेसियोको आधारमा कुन बैंक उपयुक्त ? ८ वटा 'ओभरभ्यालुड'
काठमाडौं। १७बैशाख, २०७८, शुक्रबार / Apr 30, 2021 14:34:pm
धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रवेश गरी शेयर कारोबारमा लाग्न खोजिरहनु भएको छ भने केही आधारभूत कुराहरु बारे जानकारी राख्दा सुरक्षित लगानी गर्न सकिन्छ ।
आधारभूत कुराको जानकारी बिना बजारमा प्रवेश गर्नु भनेको आफ्नो सम्पत्तिलाई जोखिममा राख्नु हो ।
शेयरमा लगानी पूर्व मोटामोटी रुपमा आफुले लगानी गर्न लागेको कम्पनीको वित्तीय स्थितिको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ । कम्पनीहरुले प्रत्येक तीन/तीन महिनामा वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दछन् ।
कम्पनीहरुले धेरै सूचकका आधारमा वित्तीय विवरणहरु प्रकाशन गर्छन । तर यहाँ हामीले मुख्य दुई सूचकका बारेमा उल्लेख गरेका छौ।
प्रतिशेयर आम्दानी (ईपिएस): कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानीले भविष्यमा उसले दिन सक्ने प्रतिफल क्षमतालाई प्रष्ट्याउँछ । सकेसम्म धेरै प्रतिशेयर आम्दानी हेर्नुहोस् । कम्पनीले आर्जन गरेको खुद नाफालाई कम्पनीको कुल शेयर संख्याले भाग गर्दा प्रतिशेयर आम्दानी (अर्निङ पर शेयर, इपिएस) प्राप्त हुन्छ । यो शेयरको मूल्य मापन गर्ने एक महत्वपूर्ण आधार हो । प्रतिशेयर आम्दानी उच्च भएकोलाई असल मानिन्छ भने कम भएकालाई कमसल मानिन्छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास अर्थात चैत मसान्त सम्मको वित्तीय विवरणको आधारमा प्रतिशेयर आम्दानीका आधारमा सूचीकृत बैंकहरुमा नबिल बैंकको सबैभन्दा बलियो देखिन्छ । जसको प्रतिशेयर आम्दानी ३७ रुपैयाँ छ । दोस्रोमा रहेको एनआईसि एशियाको ३५ रुपैयाँ छ । सबैभन्दा कम सेन्चुरीको ५ रुपैयाँ तथा सिभिलको ६ रुपैयाँ छ ।
मूल्य आम्दानी अनुपात (पिई रेसियो): बजार मूल्य र प्रतिशेयर आम्दानीको अनुपातलाई मूल्य आम्दानी अनुपात भनिन्छ । बजार मूल्यलाई प्रतिशेयर आम्दानीले भाग गरेपछि यो अनुपात निस्कन्छ । यदी यसको अंक २० छ भने एक रुपैयाँ कमाई गर्नका लागि २० रुपैयाँ लगानी परेको छ भनेर सम्झनु पर्दछ। यस्तो अनुपात जति कम त्यति राम्रो मानिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुको हकमा २० भन्दा कम हुनु राम्रो मानिन्छ । यस्तो रेसियो १५ देखि २५ सम्म भएमा उपयुक्त मानिन्छ ।
वैशाख १६ गतेको बजार मूल्यका आधारमा नेपाल बंगलादेश र सानिमा बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात सबैभन्दा कम रहेको छ । यी दुई बैंकको पिई रेसियो १५ गुणा छ। वैशाख १६ गतेको बजार मूल्यको आधारमा २० वटा वाणिज्य बैंकको पिई रेसियो २० गुणा भन्दा कम छ ।
बजार मूल्यको आधारमा यी बैंकहरुको शेयरमा गरिने लगानी तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित मान्न सकिन्छ । यस अवधिमा ७ वाणिज्य बैंकको पिई अनुपात २० गुणा भन्दा माथि छ । यी बैंकहरुको शेयरमा लगानी अन्यको तुलनामा बढी जोखिमयुक्त हुनसक्छ । सबैभन्दा उच्च पिई रेसियो सेन्चुरी बैंकको ४४ गुणा छ । यस्तै सिभिलको ३९, नबिलको ३५, एभरेष्ट, एसबिआई र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ३२ र हिमालयन बैंकको पिई ३१ गुणा रहेको छ ।
Banks Market Price 16 Baishakh 2078 Annualized EPS (Based on9Months figures) P/E Ratio
Nepal Bangladesh 379 25 15
Sanima 394 26 15
Machhapuchchre 305 19 16
Siddhartha 421 25 17
Mega 303 18 17
Prabhu 433 25 17
Nepal Bank 417 24 17
Kumari 314 17 18
Laxmi 293 16 18
Prime 429 23 18
Bank of Kathmandu 303 16 19
Agricultural Development 419 22 19
Sunrise 302 16 19
Nepal Investment 447 23 19
Global IME 427 22 19
Citizens 309 16 20
NMB 414 21 20
Nepal Credit & Commerce 352 14 25
NIC Asia 897 35 26
Himalayan 492 16 31
Standard Chartered 580 18 32
Nepal SBI 397 12 32
Everest 729 23 32
Nabil 1,270 37 35
Civil 229639
Century 233544
Rastriya Banijya Not listed in NEPSE 47 NA
कम्पनीको शेयरको बजार मूल्य र प्रतिशेयर आम्दानीबीचको अनुपात प्राइस टु अर्निङ (पिई) रेसियो हो । यो अनुपात कम (१० भन्दा कम) भएका शेयर शंकास्पद हुन्छन, १० देखि २० सम्मका तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित हुन्छन्, २० भन्दा माथिका जोखिमयुक्त हुन्छन् ।
शंकास्पद भन्नुको अर्थ कम पिइ रेसियो हुनुमा लगानीकर्ताहरुले पहिचान नगरेकाले बजार मूल्य कम हुँदा पिई पनि कम हुन्छ भने अर्कोतिर कम्पनीले नाफा नै कम गरेकोले इपिएस कम भई पिइ पनि न्यून हुनसक्छ । त्यसैले कुन कारणले पिई कम भएको हो पत्ता लगाउनुपर्छ ।
कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई बुझाउने विभिन्न पक्षहरु मध्ये कम्पनीको पिई रेसियो पनि महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । जुन कम्पनीको पिई रेसियो न्यून हुन्छ त्यस्ता कम्पनीहरुमा लगानी गर्दा लगानी सुरक्षित हुने मानिन्छ । पिई रेसियो निकाल्न कम्पनीको हालको शेयर मूल्यलाई कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानीले भाग गरिन्छ शेयर विश्लेषकहरु कम्पनीको जति उच्च पिई रेसियो त्यति उच्च जोखिम, जति न्यून पिई रेसियो त्यति न्यून जोखिम भन्ने गर्दछन् । यसरी हेर्दा लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्दा सकेसम्म कम पिई रेसियो भएका कम्पनीमा लगानी गर्दा लगानी डुब्ने खतरा कम हुने विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
बजारमा कुनै पनि कम्पनीको शेयर खरिद गर्नुपूर्व लगानीकर्ताहरुले कम्पनीका विभिन्न पक्षहरुका बारेमा अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ । कम्पनीमा लगानी गर्नु पूर्व कम्पनीको पिई रेसियो, कम्पनीको इपिएस, कम्पनीको बुक भ्यालू, कम्पनीको व्यवस्थापन लगायत विभिन्न पक्षहरुको अध्ययन गर्न जरुरी मानिन्छ ।
शेयर खरिदको छनौट गर्दा प्रतिशेयर आाम्दानी र पिई रेसियो मात्र नभई वर्षेनि लाभांश दिइरहेको छ वा छैन्, त्यसमा पनि बोनस शेयर दिइरहेको कम्पनी छान्नुपर्छ। साथै वर्षेनि कम्पनीको बिजनेसमा प्रगति देखिएका कम्पनीहरु राम्रा मानिन्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक यो समयमा बिजनेस बढ्न नसकेको खण्डमा भोलि शेयर मूल्यमा सीधै असर पर्दछ।
बैंकहरुको हकमा कुल व्याज आम्दानी, बिमा कम्पनीहरुको हकमा बिमा शुल्क, जलविद्युत तथा उत्पादन कम्पनीको हकमा बिक्री आम्दानीलाई पहिलेकोसँग तुलना गर्नुपर्छ। नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी, जगेडा कोषको आकार बढ्दै गएको हुनुपर्यो। लगानीकर्तालाई दिने गरेको लाभांशको दर पनि बढ्दै गएको हुनुपर्यो । यदी घटेको खण्डमा त्यसको कारण र आगामी दिनमा हुने प्रभावलाई पनि केलाउन त्यति गाह्रो पर्दैन। त्यसकारण वित्तीय विवरण हेर्दा कम्तिमा पछिल्लो तीन वर्षअघिको स्थितिलाई पनि समीक्षा गर्न भुल्नु हुँदैन।
त्यस्तै कम्पनीको विगत एक वर्षको बजार मूल्य पनि केलाउनुपर्छ । विगतमा कतिसम्म मूल्य पुगेको थियो र हाल किन्न लागेको मूल्य कति सस्तो वा महँगो हो भन्ने कुरालाई एक वर्षको ट्रेण्डले पनि स्पष्ट पार्छ।
बैंकहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा विस्तार सुस्त, निक्षेप जतिनै कर्जा प्रवाह 25/05/2021
बैंकर्सलाई कोरोना लागेपछि ओखलढुङ्गाका बैंक बन्द 16/05/2021